काठमाडौँ, २१ चैत्र: समाचारमा चीन यात्रामा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच गत सोमबार नेपाल–चीन रेलमार्गका बारेमा भएको छलफलको पृष्ठभूमिमा उक्त रेलमार्गको औचित्य, सम्भाव्यता र महत्त्वको विस्तृत चर्चा गरिएको छ । समाचारमा नेपाल–चीन रेलसेवालाई नेपालले भन्दा बढी महत्त्व चीनले दिएको उल्लेख छ । समाचारअनुसार, तीन चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी एक सय पाँच किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रस्तावसमेत दाखिल गरिसकेका छन् । उक्त परियोजनाको कुल लागत तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हुने र सो योजनामा रेल गुड्ने ९० प्रतिशत भाग पुल र सुरुङ हुने पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
चीनले २०२० सम्ममा नेपालको रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर टाढा पर्ने केरुङसम्म रेल ल्याउने योजना तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै समाचारमा लेखिएको छ – ‘‘धेरै नेपालीले केरुङसम्म आउने रेल काठमाडौं जोडिने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाली व्यापारीको सामान बोकेको चिनियाँ रेल छुट्ने समाचारले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यस्ता समाचारले तीनै देशका सञ्चारमाध्यम तरंगित हुने गरेका छन् नै काठमाडौं रोमाञ्चित र दिल्ली कम्पित हुने गरेको पनि देखिन्छ ।’’
निश्चय नै, समाचारमा भनिएझैँ सुविधासम्पन्न र तीव्र गतिको चिनियाँ रेल नेपालीका लागि अहिले कल्पनाको विषयमात्र भए पनि कुनै बेला यो यथार्थ बन्न सक्छ । तर, यसका लागि नेपाली राजनेताहरूमा जनतामा जस्तै तीव्र चाहना र प्रबल इच्छाशक्ति आवश्यक देखिएको छ । यस्तै सुस्त रह्यो भने उत्तरको रेल यहाँ आइपुग्दा अहिलेका युवाले चौरासी गरिसक्नेछन् ।
चिनियाँ नेता धेरै बोल्दैनन् तर जे बोल्छन् त्यसमा उनीहरूको दृढ लगाव र प्रतिबद्धता रहन्छ भन्ने चीनका विगत व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, काठमाडौंमा रेल आउन उत्तरतिरको बर्फिलो र अजंग पहाड अनि असाध्यै विकट भूगोल नभएर नेपाली नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैली पो अवरोध हो कि ?
सहमतिको माछो फेरि फुत्कियो !
राजधानीले ‘सहमतिको अन्तिम कसरतमा प्रधानमन्त्री’ शीर्षक समाचारलाई महत्त्वका साथ छापेको छ । सहमतिको प्रयाससम्बन्धी समाचारलाई नागरिकले ‘अड्कियो सहमति’ शीर्षक दिएको छ ।
राजनीतिक सहमतिका लागि शुक्रबार बसेको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मतदाता नामावलीमा छुटेका नाम राख्न र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन आयोगले समय दिनुपर्ने नयाँ सर्त राखेपछि बैठक भाँडिएको उल्लेख छ ।
आज आइतबार प्रधानमन्त्रीले फेरि बैठक बोलाएर सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्न लागेको पनि समाचारमा बताइएको छ । नागरिककै एक अर्को समाचारमा ‘चुनावका लागि मधेसी दललाई दबाब दिनुस्’ शीर्षकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आग्रहको समाचार पनि रहेको छ ।
यसै समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले ‘सरकार र मोर्चा, कति नजिक कति टाढा ?’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘५५ जिल्लाको मतपत्र छापियो’ शीर्षक समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । समाचारमा वैशाख ५ भित्र सबै क्षेत्रको मतपत्र छापेर १५ गतेबाट जिल्ला पठाउने आयोगको तयारी रहेको कुरा उल्लेख छ ।
सोही समाचारलाई गोरखापत्रले ‘मतदाता नामावली र परिचयपत्र छपाइ आजदेखि’ शीर्षक दिएको छ । आजका लगभग सबैजसो दैनिक पत्रिकाले चुनावी तयारीबारेको समाचारलाई महत्त्वका साथ सम्पे्रषित गरेका छन् । कान्तिपुरले ‘मतदाता परिचयपत्र छपाइ भोलिदेखि’ शीर्षक दिएर यसै समाचारलाई मुख्य खबर बनाएको छ ।
नेपाली वैज्ञानिकले ग्यालिलियोको सपना पूरा गरे
गोरखापत्रले ‘नेपाली वैज्ञानिकले पूरा गरे ग्यालिलियोको अधुरो सपना’ शीर्षक समाचारलाई मुखपृष्ठको अन्त्यमा महत्त्वका साथ छापेको छ । समाचारअनुसार, ग्यालिलियोले आफ्नो २० वर्षको कलिलो उमेरमा गुरुत्वप्रवेगबारे जानकारी गराएका थिए र त्यसकै आधारमा विस्थापनको सूत्र बनाएका थिए । उक्त सूत्रमा रहेको र हालसम्म समाधान हुन नसकेको गम्भीर अपूर्णतालाई नेपाली वैज्ञानिक भवीन्द्र कुँवरले समाधान गरेको रोचक विवरण गोरखापत्रको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरले मतदाता परिचयपत्र छाप्न निर्वाचन आयोग परिसरमै प्रिन्टिङ र लेमिनेसन मेसिनमा कर्मचारीहरूले परीक्षण गर्दै गरेको तस्बिर मुख्य समाचारसँगै छापेको छ भने मुखपृष्ठको अन्तमा देशका केही उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन र नतिजामा हासिल गरेको तरक्कीको खबरसहित तिनीहरूको सांकेतिक तस्बिर छापेको छ ।
राजधानीले धादिङको मलेखुमा म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि परीक्षा दिन लागेका युवतीहरू दगुर्दै गर्दाको र गोरखापत्रले रुकुममा म्यादी प्रहरी छनोट गरिँदै गरेको तस्बिर मुखपृष्ठमा छापेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘मर्यादाक्रमको महाभारत’ शीर्षक दिएर एउटा व्यंग्यात्मक स्केच र अर्को समाचारमा अन्नपूर्ण ओएमजी उपहारमा घर प्राप्त गरेकी भक्तिमाया थापाको तस्बिर छापेको छ । नागरिकले चीन–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको स्केच मुखपृष्ठमा छापेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘सीमा विवाद’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । हालै सीमावर्ती कञ्चनपुरमा भारत र नेपालका बासिन्दाबीच सीमा विवादलाई लिएर भिडन्तको स्थिति बन्न पुगेको र बर्दियाका सीमावर्ती गाउँमा समेत त्यसको संकेत देखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा यसबारे ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
नागरिकले ‘क्यान्सरमा कमिसन’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने कमिसन चलखेलका कारण वीर अस्पतालमा डेढ वर्षयता क्यान्सर बिरामीले उपचार नपाएको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको उल्लेख छ ।
गोरखापत्रले ‘बालुवाटार सहमतिको सन्देश’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार सीमाङ्कनको विवाद सङ्घीय आयोगमार्फत सुल्झाउने कुरामा मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिको सम्पादकीयमा प्रशंसा गरिएको छ ।
राजधानीले ‘मोर्चा ! कार्यकर्ताको सम्मान गर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीयको शीर्षक छ – ‘मतदाता शिक्षाको यो पक्ष’ । सम्पादकीय स्थानीय चुनावमा मतदाता शिक्षाको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।
कान्तिपुरले अलिक फरक विषय अर्थात् ‘कक्षा १ मै प्रवेश अनुचित’ शीर्षक राखेर शैक्षिक विषयवस्तु केन्द्रित सम्पादकीय लेखेको छ ।